Ungayiguqula njani iRegistry yeWindows
Uninzi lwemisebenzi ye-PC yokusombulula iingxaki (kwaye kufuneka) yenziwe kusetyenziswa izixhobo eziza neWindows okanye izixhobo zekhompyutha ezisebenza kuyo. Ukuba kuya kufuneka ujonge, uhlengahlengise, okanye wenze ulwazi kwiRegistry, unokwenza njalo.
Unokwenza uhlengahlengiso ngaphakathi kwiRegistry:
Yongeza isitshixo esitsha.
Yongeza ixabiso elitsha.
Qamba kwakhona iqhosha okanye ixabiso.
Guqula ixabiso esele likho.
Cima isitshixo okanye ixabiso.
Lonke ulwazi olucwangciswe ngamaqhosha kunye namaxabiso abaluleke kakhulu kwiWindows. Sukuzama iRegistry ngokulungisa amaxabiso ukubona ukuba kwenzeka ntoni. Ukwenza njalo kunokuba neziphumo ezibi kwikhompyuter yakho.
Ukuba kuya kufuneka ngesibindi uye kuguquko lweRegistry, landela la manyathelo:
Vula uMhleli weRegistry.
Cinezela u-Win + R kwibhokisi yencoko yencoko. Chwethezaregedit. Cinezela u-Enter.
KwiWindows 7 kunye neVista, cofa u-Ewe okanye Qhubeka okanye chwetheza igama lomlawuli.
Jonga uMhleli weRegistry.
Yenza isipele iRegistry.
Khetha iFayile → Thumela ngaphandle.
Ifayile yeRegistry yeRegistry yokuthumela ngaphandle iyavela.
Khetha indawo yogcino.
Chwetheza igama yogcino. Cofa Gcina.
Vula isitshixo esinento ofuna ukuyiguqula.
Igunya eliphezulu likuxelela igama lendlela yesitshixo. Umzekelo:
Qala kwinqanaba eliphezulu, ifayile ye- isidleke. Emva koko vula iifolda ezilandelelanayo de ufumane isitshixo osikhangelayo. Isitshixo esikhankanywe nje siqulethe iisetingi ezininzi zeWindows.
Ukwenza isitshixo esitsha:
idosi ye-prednisolone yeekati
Khetha Hlela → Entsha → Isitshixo.
Isitshixo esitsha siyavela, negama laso (Isitshixo esitsha # 1) sikhethelwe ukuhlela.
Chwetheza igama lesitshixo kwaye ucofe u-Enter.
Isitshixo siyenziwe, kodwa asinalutho; ayiqulathanga amaxabiso.
Ukwenza ixabiso elitsha:
Khetha Hlela → Entsha.
Khetha uhlobo lwedatha kwimenyu eNtsha.
Igunya eliphezulu obhekisa kulo kufuneka lichaze ukuba loluphi uhlobo lwedatha ekufuneka ulukhethile. Emva kokuba ukhethe uhlobo lwedatha, ixabiso elitsha liya kuvela kwisitshixo. Igama lalo likhethiwe, lilungele ukunika elinye igama
Chwetheza igama lexabiso.
Ukwenza ixabiso akuseti idatha yexabiso. (Ewe, eneneni, ibeka idatha kwi-zero.) Jonga inyathelo lesi-7 ukuseta ixabiso.
Ukuthiya kwakhona isitshixo okanye ixabiso:
ipilisi engqukuva emhlophe k3
Khetha iqhosha okanye ixabiso lokuphinda unike igama kwakhona.
Cinezela iqhosha leF2.
Chwetheza igama elitsha kwaye ucinezele u-Enter.
Cofa kabini ixabiso ukubiza ibhokisi yencoko yababini yokuhlela.
Hlela ibhokisi yencoko yababini ebonakala ilungiselelwe uhlobo lwedatha yexabiso eligcinwayo. Ngamanye amaxesha, lixabiso elilula okanye umtya, kodwa uHlelo lwefestile lunokuba nzima xa uhlela idatha ekrwada yokubini.
Chwetheza idatha entsha.
Ukucima isitshixo okanye ixabiso:
Khetha iqhosha okanye ixabiso.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-pregabalin
Cinezela ukucofa iqhosha kwikhibhodi.
Ukucima isitshixo kususa onke amaxabiso asezantsi kunye nazo zonke ii-subkeys kunye nawo onke amaxabiso.
Cofa kwindawo ethi Ewe ukuqinisekisa.
Vala uMhleli weRegistry.
Utshintsho olwenzayo kwiRegistry lunokufuna ukuqala kwakhona kweWindows ukuze kusebenze.
Kuphela kuxa unokuqinisekisa ulwalathiso oluvela kwimithombo emibini eyahlukeneyo kwi-Intanethi apho unokuthathela ingqalelo ukulandela le miyalelo yokuguqula iRegistry. Nokuba kunjalo, qiniseka ukuba ujonga ukuba le mithombo mibini ayizikopi eziphindiweyo zolwazi olufanayo.
Omnye wemithombo efanelekileyo yolwazi lweRegistry yile Indawo yokuxhasa iMicrosoft .
wenza njani dm kwi-twitter
iziphumo ebezingalindelekanga ze-omega 3
amagama e-norgestimate-ethinyl estradiol
yenza i-histogram ngokugqwesileyo
Ungalifumana njani ixabiso lokulingana